မိန်းကလေးတယောက်ကို အယုံသွင်းပြီး ဖျက်စီးတဲ့ လူတယောက်ကြောင့် ဗိုက်တစ်လုံးနှင့် ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ အမျိုးသမီ – Myanmar Update News
မိန်းကလေးတယောက်ကို အယုံသွင်းပြီး ဖျက်စီးတဲ့ လူတယောက်ကြောင့် ဗိုက်တစ်လုံးနှင့် ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ အမျိုးသမီး
SaiBhone Minsatt သူနဲ့ညီမရည်းစား ဖြစ် ပြီး လွန်သွား ခဲ့ တယ်… အစကတော့ သူက တာဝန် ယူမယ် တွေ ဘာတွေ ပြောတယ်.. တကယ် တန်း ကိုယ် ဝန်ရှိပီး2လ ကျော် မှာ အဆက် သွယ် မလုပ်တော့ဘူး.. သူ့ မိသားစုက အစ လူစိတ် မရှိ အဆက်သွယ် မရ သူ့အမေ ကို ဖုန်းဆက် လဲ တာဝန်မယူနိုင် ဘူး
နင်တို့ဘက်က ကြိုက်တာ လုပ်လို့ပြောတယ် သူနဲ့ ညှိကြည့်ဖို့ ကြိုးစားလဲ အတွေ့ တောင်မခံ ဘဲ ကြိုက်တဲ့ နေရာတိုင်လို့ပြောပါတယ် လို့ပြောပါတယ်.. သူနဲ့ကိုယ်ဝန်ရတာ သိသိချင်းကဒီဇင်ဘာလ.. ဖစ်လာတဲ့ပြသနာကို အတူရှင်းဖို့ သူကိုအဆက်သွယ်လုပ်ခဲ့တယ်.အဲ့ကစပြီး သူကမဆက်သွယ်မလုပ် ခေါင်းရှောင်နေခဲ့တာ ဒီနေ့အထိပဲ..
facebookမှာ blockတယ် သူငယ်ချင်းacc.. fake accတွေ လုပ်ပြီး သူကိုငိုတလှည့်ရီတလှညိ့တောင်းပန်ပြီး စာပို့တယ်..! စာတွေ seenဖစ်တယိ.. replyမလာခဲ့ဘူး.. ! Phoneတွေဆက်တော့ရော.. ! သိသမျှphone noတွေအကုန်ပိတ်ချလိုက်တယ်..! ဘယ်လိုမှအဆက်သွယ်လုပ်လိုမရအောင် သူလုပ်တယ်.. သူငယ်ချင်း တချိူ့ကိုအကူညီတောင်းပြီး
အိမ်ကို သွားတော့ အထဲမှာ လူရှိရက်နဲ့ထွက်မလာခဲ့ဘူး.. သူအဖေအမေဆီဆက်သွယ်ပြီး အကြောင်းကြားခဲ့တယ်.. ဖုန်းတောင်အပြောမခံပဲ blacklistလုပ်သွားတယ် (သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းမစာ) အခုဆို ကိုယ်ဝန်က၆လကျော်၇လထဲရောက်နေပီ .. ကလေးမွေးဖို့ဘယ်လောက်မှမလိုတော့ဘူး ကျမဒီကြားထဲ အရှက်မရှိအမျိူးမျိူး အဆက်သွယ်လုပ်ခဲ့တယ်..
တာဝန်မယူချင်လို့ခေါင်းရှောင်နေတုန်း သူတို့က🙂 ပြသာနာတွေ အကြီးကြီးမဖစ်ချင်လို့ အချိန်တွေအများကြီး စောငိ့ပေးခဲ့တာပါ အခုတော့သူတို့လုပ်ရပ်ကတရားလွန်လာလို့ပါ မိန်းကလေးတွေလည်းဒီလိုမျိူး လူတွေနဲ့ဝေးဝေးရှောငိနိုင်အောင်ပါ🙂ပီး တော့ သူ့အမေ က ညီမကို သူ့သားဆီ က ခြူ စား တယ် ပြောတာ ညီမက ခြူ စားဖို့နေနေ သူငယ်ချင်း တွေကအစသိခဲ့တယ်
ဖုန်းတောင်မကျန် စားစရာ မရှိလမ်းဘေးရောကိတဲ့အထိခွေးဖစ်ခဲ့တာ ညီမပါ.. 🙂 ဘယ်သူကခြူစားခဲ့လည်း.. ဘာတွေလုပ်ခဲ့လည်းဆိုတာ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံသလို သူငယ်ချင်း အပေါင်းသင်းတွေကအစအကုန်သိခဲ့တယ်.. နင်တို့လို့ တိရိစ္ဆာန် စိတ်ဓာတ်နဲ့ မိသားစု ကို ငါ မှန်တဲ့ အတွက် ငါ့အရှက် ကွဲ ခံ ပြီး တင်လိုက်တာ ပါ🙂ငါကလည်း ငါမှန်တယ်ထင်လို့🙂ဝိုင်းပြီးshareပေးကျပါ🙂 crd – Cele Cele world
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ လူစုလူဝေးဖြင့် ပွဲလုပ်သည်ဟု ပြောဆိုနေကြသည့်အပေါ် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၏ ရှင်းလင်းချက်
ရန်ကုန် – ဒလတံတား ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ရန်ကုန်မြစ် တွင်းခြေချော် ပြုတ်ကျခဲ့သော တရုတ် နိုင်ငံသားအား ရှာဖွေတွေ့ရှိ
ပဲခူးမြို့အတွက် ဝမ်းသာစရာ သတင်းပါ … ပဲခူးမြို့ အောက်စီဂျင်အတွက် ပူစရာမလိုတော့ပါ